Saddex nooc oo loogu talagalay Xayeysiiska Warshadaha Safarka: CPA, PPC, iyo CPM | Martech Zone
Haddii aad rabto in aad ku guulaysato warshado tartan badan leh sida safarka, waxaad u baahan tahay inaad doorato istaraatijiyad xayaysiis ah oo la jaan qaadaysa yoolalka iyo mudnaanta ganacsigaaga. Nasiib wanaag, waxaa jira xeelado badan oo ku saabsan sida kor loogu qaado astaantaada internetka. Waxaan go'aansanay inaan is barbar dhigno kuwa ugu caansan iyaga oo aan qiimeyno faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka.
Si daacad ah, waa wax aan suurtagal ahayn in la doorto hal nooc oo ugu fiican meel kasta iyo had iyo jeer. Noocyada waaweyni waxay isticmaalaan dhowr nooc, ama xitaa dhammaantood isku mar, iyadoo ku xiran xaaladda.
Qaabka-Per-Click (PPC) Model
Lacag-guji-ba (PPC) xayeysisku waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee xayaysiisyada. Waxay u shaqeysaa mid aad u fudud: ganacsiyadu waxay iibsadaan xayeysiisyada iyagoo ku beddelaya dhagsi. Si loo iibsado xayaysiisyadan, shirkaduhu waxay inta badan adeegsadaan aaladaha sida Google Ads iyo xayaysiis guud.
PPC waxay caan ku tahay summadaha sababtoo ah way fududahay oo way fududahay in la maareeyo. Iyadoo ku xiran baahidaada, waxaad go'aamin kartaa halka ay dhagaystayaashaadu degan yihiin, adigoo ku daraya wax kasta oo aad u baahan tahay. Waxaa intaa dheer, tirada taraafiggu waa mid aan xadidnayn (xaddidaadda kaliya ayaa ah miisaaniyaddaada).
Dhaqanka caadiga ah ee PPC waa iibsashada sumadda, marka ganacsiyadu ay dalbadaan shuruudaha calaamadda qolo saddexaad si ay u garaacaan oo ay u soo jiitaan macaamiishooda. Badanaa shirkadaha ayaa lagu qasbaa inay tan sameeyaan sababtoo ah tartamayaashu waxay iibsadaan xayeysiis ku salaysan codsiyada tartamayaasha. Tusaale ahaan, marka aad Google ka baadho Booking.com waxa ay noqon doontaa qaybta ugu horraysa ee qaybta bilaashka ah balse waxa ugu horreeya xayaysiiska Hotels.com iyo noocyada kale. Dhagaystayaashu waxay ugu dambeyntii u tagaan kan iibsada xayeysiiska PPC; Sidaa darteed, Booking.com waxay u baahan tahay inay bixiso xitaa marka ay tahay hogaamiyaha raadinta bilaashka ah. Haddii shirkadda aad raadinayso aanay ka soo muuqan qaybta xayaysiiska, waxa laga yaabaa inay waydo macaamiisha maalin cad. Haddaba, xayaysiisyada noocaasi ah ayaa meel walba ku baahay.
Si kastaba ha ahaatee, qaabka PPC wuxuu leeyahay khasaare weyn: beddelaadku lama dammaanad qaadayo. Shirkaduhu waxay qiimayn karaan natiijooyinka ololaha si ay u joojiyaan kuwa aan waxtarka lahayn. Waxa kale oo suurtogal ah in shirkadu kharash garayso wax ka badan inta ay soo gasho. Waa khatarta ugu muhiimsan in la tixgeliyo mar walba. Si loo yareeyo, waxaan kugula talinayaa inaad hubiso in ololayaashaadu ay gaarayaan dhageystayaasha bartilmaameedka ah. Maskax fur oo noqo dabacsanaan.
Qiimaha-Maylkiiba (CPM) Model
Qiimaha-Per-Mile waa mid ka mid ah moodooyinka ugu caansan kuwa doonaya inay helaan caymis. Shirkaduhu waxay bixiyaan kunkii aragti ama aragti xayeysiis. Inta badan waxaa loo adeegsadaa xayaysiis toos ah, sida marka meel laga soo saaro lagu sheego astaantaada nuxurkeeda ama meel kale.
CPM waxay si gaar ah u shaqeysaa si ay u dhisto wacyiga sumadda. Shirkaduhu waxay cabbiri karaan saamaynta iyagoo isticmaalaya tilmaameyaal kala duwan. Tusaale ahaan, si loo kordhiyo aqoonsiga sumadda, shirkaddu waxay baari doontaa tirada jeer ee dadku raadiyaan astaanta, tirada iibka, iwm.
CPM waa meel kasta suuqgeynta suuqgeynta, kaas oo weli ah goob cusub. Sanadihii la soo dhaafay, waxaa jiray koror la taaban karo oo saameeyayaasha warshadaha.
Xajmiga suuq-geynta suuq-geyneed ee adduunka ayaa lagu qiimeeyay USD 7.68 bilyan sanadka 2020. Waxaa la filayaa inuu ku fido kobaca sanadlaha ah ee isku-dhafka ah (CAGR) ee 30.3% laga bilaabo 2021 ilaa 2028.
Cilmi Baadhista Grand View
Si kastaba ha ahaatee, CPM waxay kaloo leedahay cillado. Tusaale ahaan, shirkadaha qaarkood waxay diidaan istiraatiijiyaddan marxaladaha hore ee ganacsigooda sababtoo ah way adagtahay in la qiyaaso saameynta xayeysiisyadan.
Ficil kastaCPA) Model
CPA waa qaabka ugu cadaalada badan ee soo jiidashada taraafikada - ganacsiyada waxay bixiyaan kaliya iibka ama ficilada kale. Waa arrin aad u dhib badan, maadaama aysan suurtagal ahayn in la bilaabo shirkad xayaysiis ah 2 saacadood, sida PPC, laakiin natiijadu aad bay ugu kalsoon tahay. Haddii aad si sax ah u hesho bilawga, natiijadu waxay noqon doontaa mid la qiyaasi karo dhinac kasta. Tani waxay kuu ogolaan doontaa inaad gaadho bartilmaameedkaaga waxayna ku siin doontaa xog tiro badan oo ku saabsan waxtarka ololahaaga.
Waan ogahay waxa aan ka hadlayo: shabakada suuq-geynta ee xiriirka ee shirkaddayda - Lacag bixinta safarka - waxay bixisaa ku shaqeeya qaabka CPA. Labada shirkadood ee safarka iyo bloggers safarka labaduba waxay xiiseynayaan wadashaqeyn wanaagsan maadaama shirkaduhu ay bixiyaan kaliya ficilka, isla markaana ay helaan caymiska iyo aragtida, milkiilayaasha taraafikada ayaa aad u xiiseynaya xayeysiinta alaabada ama adeegyada khuseeya dhagaystayaashooda, maadaama ay kasbadaan guddiyo sare. Haddii macaamiishu iibsadaan tigidhada ama ay ballansadaan hudheel, dalxiis ama adeeg kale oo socdaal. Suuqgeynta xiriirka la leh guud ahaan - iyo Lacag bixinta safarka gaar ahaan - waxaa isticmaala shirkadaha safarka ee waaweyn sida Booking.com, Getyourguide, TripAdvisor iyo kumanaan shirkado safar oo kale ah.
In kasta oo CPA ay u ekaan karto istaraatiijiyadda xayaysiiska ee ugu fiican, waxaan ku talinayaa in aad si ballaadhan uga fikirto. Haddii aad rajaynayso inaad ka qaybgasho qayb weyn oo ka mid ah dhagaystayaasha aad beegsanayso, tani ma noqon karto xeeladda kaliya ee aad leedahay. Markaad ku darto istiraatijiyaddaada ganacsi, si kastaba ha ahaatee, waxaad gaari doontaa dhagaystayaal badan guud ahaan sababtoo ah waxaad isku dari doontaa dhagaystayaasha la-hawlgalayaashaada. Suurtagal maaha in xayaysiisku ku jiro si uu tan u fuliyo.
Xusuusin kama dambays ah, halkan waa tilmaan: waa muhiim in la xasuusto in midna xeeladaha liiska ahi aanu ahayn xalka ugu dambeeya. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waxaa ku jira dabinno, markaa hubi inaad hesho istaraatijiyado isku dhafan oo sax ah oo ku salaysan miisaaniyadaada iyo yoolalkaaga.
Tags: kharash falkiibaqiimaha halkii maylqiimaha kunkiibacpacpmsuuqgeynta suuqgeyntaBixi halkii gujippcwarbaahinta bulshada
WordPress: Isticmaalka jQuery si aad u furto daaqad LiveChat Adigoo gujinaya Linkiga ama badhanka Adigoo isticmaalaya Elementor
Ku laabo Sizzle: Sida Suuqgeeyayaasha E-Ganacsiga ay u Isticmaali karaan Hal-abuur si ay u Kordhiyaan Soo-noqoshada